WARBIXIN: Maxay tahay sababta uu Lionel Messi Koob ula qaadi la’yahay qarankiisa Argentina? – Gool FM
WARBIXIN: Maxay tahay sababta uu Lionel Messi Koob ula qaadi la’yahay qarankiisa Argentina?
Haaruun July 4, 2019
(Buenos Aires) 04 Luulyo 2019. Dabcan shaki kama taagna in Lionel Messi yahay xiddig caalami ah, balse waxa aynu warbixintan ku eegi doonnaa, maxaa ku dhaca Messi marka uu joogo xulka qarankiisa Argentina, ka fariisashadiisii ciyaaraha caalamiga ah iyo dib u soo celintiisii ka hor koobkii adduunka ee 2018.
Pele iyo Maradona waxa ay ka aaminsan yihiin Messi, sirta ka dambeysa guulaha uu Barcelona la gaaro iyo xogo kale oo adan horay kaga ogeyn Lionel Messi iyo dhibatada ka haysata qarankiisa, maadaama xulkiisa laga reebay Copa America 2019?.
Lionel Messi mucjisada kubadda cagta caalamka waxa uu kula guuleystay kooxdiisa Barcelona in ka badan 32 koob, balse mid kaliya oo aan heer sare ahayn ayuu u qaaday Waddankiisa Argentina, Messi waa mid ku jira xaalad jahwareer ah marka uu u ciyaarayo xulkiisa qaranka Argentina xitaa isaga oo ay hareero joogaan xiddigo badan oo cajiib ah.
Warbixintan oo aad u dheer laguna faafaahinayo sababta uu mar waliba Lionel Messi koob weyn ula qaadi la’yahay qarankiisa Argentina waxaa eegaya Wariyeheennada Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho ee ka daawo muuqaalka hoose.
RASMI: Jadwalka kulamada furitaanka horyaalka La Liga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-2020 oo la shaaciyey – Yey ku bilaabanayaan Barcelona iyo Real Madrid?
RASMI: Xilliga la ciyaari doonto labada lug ee horyaalka kulamada Madrid Derby ee Kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid oo la shaaciyey